Ellen Harding Baker dia nanisy peta-kofehy mba hampianarana astronomia tamin'ny 1876 | Famoronana an-tserasera
Una mpampianatra tamin'ny taona 1876 no nanjaitra ity lamba firakotra ity mba hanampiana amin'ny kilasanao amin'ny astronomia ny fomba fihodinan'ny planeta ny Masoandro amin'ny rafitry ny masoandro. Asa kanto hampianarana ary haneho ara-pahitana ny fomba fivezivezen'ny planeta amin'ny lalana tsy manam-petra manodidina ny mpanjaka kintana.
Ny anarany dia Ellen Harding Baker, astronoma amerikana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nalaza tamin'ny fomba fampianarany manokana sy nampihatra fanabeazana tao amin'ny kilasiny. Tsaho fa nandany 7 taona nanjaitra ny tontolon'ny masoandro tamin'ny lamba firakotra izy, izay ampianariny ny mpianany.
Ny refin'ny quilt amin'ny Solar System nahatratra 89 x 106 santimetatra izy ireo ary vita tamin'ny volon'ondry izy io mba hanomezana azy ny farany famaranana amin'ny appliqué miloko lehibe, kofehy lefona ary koa ny amboradara vita amin'ny landy.
Mitovy amin'ireo sary amin'ny boky astronomia tamin'izany fotoana izany, mampiseho ny Masoandro manodidina ny afovoany, ireo planeta valo an'ny rafitry ny masoandro, ary koa ny peratra asterôida ary fifangaroan'ny kintana samihafa.
Azonao atao koa ny mahita ny volana eto an-tany, ny volana Galiliana an'i Jupiter ary ny volana maro any Saturn, Neptune, ary Uranus; nahafaly azy mihitsy aza ny nanampy ny peratra Saturne tamina applique mavo.
Afaka mahita ihany isika a papango lehibe eo amin'ny zoro havia ambony izay heverina fa maneho ny Halley's Comet, izay hita farany (talohan'ny namoronana ny quilt) tamin'ny 1835.
Una lambam-bolo vita amboradara mampino izay mijanona ho ohatra tena tsara amin'ny fomba azo ampianarina ny astronomia amin'ny alàlan'ny fisaintsainana kely sy ny faniriana hanabe kilasy, toa an'i Ellen. Roa andro monja taorian'ny nahatongavan'i "Insight", ilay robot vaovao NASA, dia tadidintsika io astronoma lehibe io sy ny fanolorany tena amin'ny fampianarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Miaraka amin'ny fanjaitra sy tsipika hampianarana ny astronomia amin'ireo mpianany tamin'ny 1876
Motera fikarohana nohavaozina an'i Pantone hahitana soatoavina miloko mitovy
Kalandrie 2019 maimaim-poana